छोराचाहिँ जन्मजात ‘मान्छे’ ! |
छोराचाहिँ जन्मजात ‘मान्छे’ !
प्रकाशित मिति :2018-05-03 13:19:06
धादिङको गजुरी गाउँपालिकाकी एक अपाङ्गमाथि श्रीमानले दुई सौता भित्र्याए । जेठी श्रीमती तर्फ २ सन्तान छन् । माइली ल्याएको एक वर्ष पछि कान्छी पनि भित्र्याए । जेठी श्रीमतीको नागरिकता, विवाह दर्ता छैन । बच्चाको जन्मदर्ता पनि छैन । उनी शारीरिक अपाङ्ग छिन् ।
सानैमा एउटा खुट्टा पोलिएको र पछि लडेर कम्मरको हड्डी भाँचिएको हुनाले हिँड्न निकै समस्या हुन्छ । तर नागरिकता विवाह दर्ता नभएकोले अपाङ्गता कार्ड छैन । हुन त उनका श्रीमान पनि शारीरिक अपाङ्गता छन् । श्रीमतीलाई अपाङ्गता परिचय पत्र बनाइदिनुपर्छ भनेर आफ्नो पनि नबनाएको थाहा पाइयो । श्रीमतीलाई पिटेर १० महिनाको छोरीसहित घर निकाला गरे । उनलाई गाउँपालिकाको सहयोगमा उद्धार गरि सेवा गृहमा राखियो ।
उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिइन् । प्रहरीको छलफलमा पीडकले भने “आइमाई भएर आइमाईको तहमा नबस्ने स्वास्नीलाई पिटिहालिन्छ नी ! मेरो सम्पत्ति खाउँला भन्ने सोचेकी भएर कागज पत्र नबनाइदिएको हुँ । कसले के गर्न सक्छ ? मेरो हातको कुरो हो म बनाइदिन्न ।”
धादिङ जिल्ला बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाकी दुइ सन्तानकी आमा एक महिलालाई श्रीमानले लामो समयदेखि यातना र दुव्र्यवहार गर्दै आएका थिए । उनी सुत्केरी भएर बसेको बेलामा श्रीमानले दोस्रो विवाह गरे । त्यसपछि जेठी श्रीमतीलाई वास्ता गरेनन् । उनी बच्चा च्यापेर कहिले माइत, कहिले घर गर्थिन् ।
उनको नागरिकता विवाह दर्ता र २ छोराको जन्म दर्ता थिएन । श्रीमानसँग नागरिकता बनाइदेउ भन्दा ‘मेरो सम्पत्ति खाएर अर्कोसँग पोइल जाउँला भनेर ! बनाइदिन्न’ भन्थे । उनी सहेरै बसिरहेकी थिइन् । अहिले आएर थाहा पाइन् । पछि विवाह गरेको कान्छी श्रीमतीको नागरिकता विवाह दर्ता बनाइदिइसकेछ श्रीमानले ।
त्यसपछि उनले प्रहरीमा निवेदन दिइन् । प्रहरीमा छलफल भयो । प्रहरीको छलफलमा जेठी श्रीमतीको कानुनी कागजात नबनाइकन किन कान्छी श्रीमतीको बनाएको भन्ने प्रश्नमा पीडकले भने “मेरो नियन्त्रणमा नबस्ने स्वास्नीको नागरिकता किन बनाइदिने त ? मलाइ जुन प्रति विश्वास थियो उसैको बनाइदिएँ । लेखपढ गर्न पनि नजान्ने गोबर जस्ती छ, किन चाहियो नागरिकता ?”
धादिङ जिल्ला थाक्रे गाउँपालिकाकी एक अपाङ्ग महिलाको २ छोराछोरी छन् । श्रीमानले दोस्रो विवाह गरे । दोस्रो विवाह पछि श्रीमानले घरमा भएको सबै सामग्री सहित उठाएर अन्तै लगे ।
उनले जसोतसो जीविकोपार्जन गरी दुई सन्तान पाल्दै आएकी थिइन् । उताबाट श्रीमान र कान्छी श्रीमतीले फोनमा गाली बेइजती गर्ने र मार्ने धम्कि दिइरहे । उनको नागरिकता विवाह दर्ता थिएन । उनले प्रहरीमा निवेदन दिइन् । छलफल गरि नागरिकता विवाह दर्ता बनाइदिने र दुव्र्यवहार नगर्ने सर्तमा उनले मिलापत्र गरिन् ।
कागजपत्र त बन्यो तर व्यवहार सुध्रिएन । उनलाई उत्तिकै मानसिक यातना र धम्की आइरहेकोले अदालतमा अंश सहितको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता गरिन् । मुद्दा दर्ता गरेपछि झन् यातना बढ्यो । घरमा श्रीमान र कान्छी श्रीमती बस्छन् । प्रभावित महिला २ सन्तान लिएर आफूले सानो व्यवसाय गरेको एउटा सटरमै सुत्छिन्, बस्छिन् ।
मुद्दा दर्ता भएको केही समय पछि अदालत परिसर भित्रै श्रीमती माथी मेरो सम्पत्ति खाउँला भन्ने सोचेकी होलास् । तँलाई कसैगरी नी मेरो सम्पत्ति दिन्न भन्दै हातपात गर्ने प्रयास गरे ।
यी केही प्रतिनिधी घटना हुन् । यस्ता धेरै महिला बहुविवाह, घरेलु हिंसा र कुटपिटको शिकार हुनुपरेको छ । धेरै महिलाको नागरिकता र विवाह दर्ता बन्न सकेको छैन । उनले जन्माएका छोराछोरीको जन्म दर्ता छैन ।
एउटा पुरुषले दुइटी तीनवटी विवाह गरेको छ र पनि निर्धक्कले हिँडिरहेको छ । उसलाई कसैले केही भन्दैन । न घरपरिवारले न समाजले । तर महिला पल पल मरेर बाँच्नुपर्छ । फेरि पनि दोष महिलामाथि नै थोपरिन्छ ।
एक छोरी ‘छोरी’ भएर जन्मिए बापत जन्मदेखि मृत्युसम्म जीवनका सबै चरणमा हिंसा, तनाव, यातना र शोषण सहेर बाँच्नुपर्छ । अझ यसो भनौं पटक पटक मर्दै बाँच्नुपर्छ । छोरी भएर जन्मिएपछि विवाह अघि पिताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । विवाह पछि पतिको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान खोज्ने या भनौं स्वतन्त्रता खोज्ने छोरीले ‘जिउँदो’ भएर बाँच्न पाउँदिनन् ।
नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार हो । नागरिक हुनुको परिचय कार्ड हो । यो देशको माटोमा जन्मिए पछि यहाँको नागरिक हुनुको पहिचान हो । छोरा होस् या छोरी । सबैले कानुनले तोकेको उमेर हद पुरा गरेपछि पाउने नागरिक प्रमाणपत्र हो । तर छोरीका लागि नागरिकता प्राप्त गर्नु कुनै खेल वा युुद्ध जित्नु सरह हुन्छ ।
अहिले पनि धेरै बाबु आमाले नबुझेर वा यसको आवश्यकता महसुस नगरेर विवाह अघि छोरीको नागरिकता नबनाइदिने चलन छ । छोरा बाहिर जाने या कुनै काममा लाग्ने भएकोले छोराको चै नागरिकता बनाइदिने तर छोरीको आवश्यक परेको छैन भनेर नबनाइदिने गर्नाले पनि समस्या बढेको हो । विवाह पछि श्रीमानले आफ्नो मुठ्ठीको साधन सोच्ने र अंश खाने भाँडोको रुपमा बुझ्ने गरेकोले धेरै महिला नागरिकताविहीन बन्नु परेको छ ।
छोरी भएर जन्मिएपछि ‘छोरीकै तहमा’ बस्नुपर्छ । स्वास्नी भएपछि ‘स्वास्नीकै तहमा’ बस्नुपर्छ । आमा भएपछि ‘आमाकै तहमा’ बस्नुपर्छ । हजुरआमा भएपछि ‘हजुरआमाकै तहमा’ बस्नुपर्छ ।
छोरी भएर जन्मिएपछि ‘मान्छेको तहमा’ बस्न पाइन्न । ‘मान्छेको दर्जा’ खोज्न पाइन्न । ‘म को हुँ’ भनेर प्रश्न गर्न पाइन्न । किनकी अहिलेसम्म छोरी भन्ने जात ‘मान्छे होइन’ । अनि कसरी मान्छे भए बापत पाउने अधिकार माग्न मिल्छ ?
यो समाजले देखेको मान्छे त छोरा जात मात्र हो । समाजका लागि केवल छोरा भए हुन्छ । उ असल हुनुपर्दैन । इमान्दार हुनुपर्दैन । सहयोगी हुनुपर्दैन । अरुको पीडा महसुस गर्ने हुनुपर्दैन । बाटोमा हिँड्दा अरुको छोरीमाथी गिद्धे नजर नलगाउने हुनुपर्दैन ।
अनि जाँड रक्सी नखाने र स्वास्नी नकुट्ने हुनुपर्दैन । किनकी जन्मदै उ बलवान, धैर्यवान, तागददार, कठोर जसलाई जे पनि गर्न सक्ने ‘मर्द’ हुन्छ ।
उ अर्थात् छोरा जन्मजात “मान्छे” हो । उसको मान्छे भए वापत पाउने कुनै पनि अधिकार खोसिएको छैन । उसलाई कसैले गिद्धे नगर लाउँदैन । उ माथी बहुविवाह हुँदैन । यातनाको कारण पाठेघर खस्दैन । कुटाइको कारण गर्भपतन हुँदैन । कसैले बलात्कार गर्दैन ।
कसैले कुटपिट, धम्की, यातना, शोषण र घर निकाला गर्दैन । त्यो नागरिकताको छेस्को पाउन कुनै युद्ध जित्नुपर्दैन । सम्पत्ति मागेको निहुँमा, नागरिकता मागेको निहुँमा जलाइनु र मारिनु पर्दैन । एक जना पनि छोराले अहिलेसम्म कसैको लात्ती खाएर बिना दोष भोकभोकै घर निकाला हुनु परेकै छैन ।
अनि कसरी थाहा पाओस् म जस्तै मेरा छोरी, श्रीमती र आमा पनि ‘मान्छे हो’ भन्ने !
हाम्रो पनि मन हुन्छ । मुटु चल्छ र दुख्छ भन्ने !
हामीलाई पनि माया र सम्मान चाहिन्छ भन्ने !
हो यति फरक छ । हामी (छोरी) हरू जन्मिएर पनि ‘मान्छे’ हुन नै पाएनौं । उनीहरू (छोरा) हरू जन्मजात मान्छे भए । र ‘जे पनि गर्ने पाउने’ छुट पाए ।